Shir weynihii xisbiga S oo galabta furmi doona - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Macaashka shirkadaha ku howl-gala adeegyada bulshada oo noqon doonta su'aal dood badan dhalisa. Sawirle: Henrik Montgomery / SCANPIX
Shir weynihii xisbiga S oo galabta furmi doona
Macaashka shirkadaha ayaa noqon doonta dood ay hardi ballaaran ka dhacdo
La cusbooneeyay onsdag 3 april 2013 kl 14.45
La daabacay onsdag 3 april 2013 kl 10.20
Magaalada Göteborg ayuu galabta uga furmi doonaa shirweynahoodii xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadiga (S), halkaasina oo ey kulan isugu iman doonaan xubno xisbiga u meteleya dhammaan dalka oo dhan laguna jeexi doono dhabbadii xisbigu ku doorasho geli lahaa xilliga dayrta ee sannadka foodda innagu soo haya.
Su'aasha ugu weyn ee la saadaalineyo in dood ballaarani ka aloosanto ayaa ah macaashka ey shirkaduhu ka helaan adeegyada bulshada ee hab-nolol-wanaagga. Su'aashaa ayaa looga gudbiyey shir-weynaha 175 hindise oo middaa la xiriira, iyada oo qaar badan ee hindiseyaashaa ka mid ahina ey soo gudbiyeen xubnaha matalaya gobollada dhumucda ku leh xisbiga.
Ururrada dhallin-yarad ee SSU iyo haweenka ee xisbiga, S ayaa meel uga soo jeestey su’aasha la xiriirta macaashka shirkadaha adeegga ee daryeelka waayeelka, xannaannada dhallaanka, iskuullada iyo dhammaan howlaha lagu miisaaniyad-geliyo qidmadda bulshada laga qaado. iyagoona taabac-san fikirka ururka shaqaalaha ee LO.
Halka uu hoggaanka xisbigu ka soo hor-jeedo in la xakameeyo macaashka, hase yeeshee lagu tallaabsado in xeerarka la adkeeyo, isla-markaana kor loo qaado tayada howlaha adeegyada hab-nolol-wanaagga. Waa in shuruud laga dhigo aqoon-kororsiga iyo tirada shaqaalaha ee goob ka howl-gasha.
Berito ayuu shir-weynuhu u codeeyn doonaa in Stefan Löfven loo doorto hogaamiye rasmi ah ee xisbigu yeelan doono. Löfven ayaa kursiga hoggaanka si ku meel-gaar ah ugu fadhiyay iminka muddo sannad cagacageeynaysa, jagadaasina oo uu u magacaabay hoggaanka sare ee xisbigu.
Shir-weynaha xisbiga, S ee magaalada Göteborg uga furmi doona maanta ayaa socon doona illaa iyo maalinta axadda, halkaasina oo ey ka qeyb qaadan doonaan xubno tiradoodu gaarsiisan yihiin 350 oo xisbiga u metela dhammaan unugyada xisbiga ee dalka.
Sideed u aragtaa doodda macaashka shirkadaha adeegga bulshada?
Mid sii socota
In la manuuco
In la xaddido
Maxaad kala socotaa su'aalaha dooddaha dhalin doona ee shir-weynaha xisbiga S?